Vandala - Wikipedia
Ny Vandala dia vahoaka na vondrom-poko jermanika tatsinanana izay fantatra voalohany teo amin'ny tantara fa nonina tao atsimon'i Pôlônia ankehitriny. Ny ankamaroan'ny Vandala dia nifindra monina mifanesy nankany amin'ny Saikanosy Iberika, avy eo nankany Afrika Avaratra ka tao izy ireo nanorina ny fanjakana vandala tamin'ny taonjato faha-5.
Taloha dia nonina tao amin'ny faritra anelanelan'ny renirano Vistola (pôlôney: Wisła; latina: Vistula) sy ny renirano Odera (pôlôney: Odra; alemana: Oder) ny Vandala, avy eo nifindra monina nankany andrefana sy any atsimo andrefana. Tamin'ny taona 406 dia niditra tany Galia (frantsay: Gaule) izy ireo ka nandroba ny fananan'ny olona tao nandritra ny roa taona. Taorian'izay dia nanani-bohitra tao Espaina izy ireo tamin'ny taona 409 ka nifanandrina tamin'ny Visigoty ka voatery nandalo ny andilan-dranomasin'i Jibraltara izy ireo.
Tamin'ny taona 428 i Gaiserika (gotika: Gaisareiks; frantsay: Genséric; latina: Gaisericus,) dia lasa mpanjakan'ny Vandala ka nitondra azy ireo nankany Afrika Avaratra tamin'ny taona 429. Resiny ny Rômana ka izy ireo no nifehy ny tany midadasika mifanandrify amin'i Aljeria sy ny tapany avaratr'i Marôka tamin'ny taona 435. Tamin'ny taona 439 dia azon'ny Vandala i Kartago (na Kartazy) izay nataony renivohitra. Nanana andian-tsambo izay nanjaka tamin'ny faritra andrefana ao Mediteranea ny Vandala, ka nanatanteraka fandrobana ireo nosy ao amin'io ranomasina io sy tao amin'ireo morontsiraka espaniôla, hatramin'ny tanànan'i Rôma tamin'ny taona 477.
Nanaraka ny firehana arianan'ny kristianisma ny Vandala ka tsy afaka nanapahaka ny Rômana tao Afrika sy ny Berbera. Tamin'ny taona 533 dia nandefa ny mpitari-tafika Belisariosy (grika: Βελισάριος / Belisários; latina: Flavius Belisarius) hiady amin'ny Ariana ny emperora bizantina Jostiniano I. Resy tamin'ny taona 534 ny Vandala ka nanatao sesy tany sy nampidirina ho miaramila hanatevina ny tafika bizantina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vandala&oldid=979260"
Voaova farany tamin'ny 9 Janoary 2020 amin'ny 03:25 ity pejy ity.